Madaxweynaha Masar oo loo doortay hogaminta Ururka Midowga Afrika ee sanadlaha – Walaal24 Newss
Madaxweynaha Masar oo loo doortay hogaminta Ururka Midowga Afrika ee sanadlaha
Madaxda Dowladaha xubnaha ka ah Ururka Midowga Afrika (AU)-da ayaa kulan ku lahaa shalay Xarunta Dhexe ee Ururkaasi oo ku taalla caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Abeba.
Kulankaasi waxaa loo doortay Hoggaaminta Sannadlaha ee Ururkaasi Midowga Afrika Madaxweynaha dalka Masar, C/Fataax Al-siisii, isagoo xilkaasi kala wareegay dhigiisa dalka Ruwanda, Paul Kigambe.
Hoggaamiyayaasha waxay kaloo ka hadleen Doorashadda Dimuqraadiga iyo Xil-kala wareegista nabdoon ee Qaaradda Afrika, waxayna amaaneen dalal ay ka mid yihiin Somalia, South Sudan, Ethiopia, Eritrea, Koongada Dimuqraadiga, Liibiya, iyo Afrikada Dhexe, kuwaasi oo la tilmaamay inay xusheen inay wada-xaajood iyo nabad ku xaliyaan khilaafyada ka jira dalalkooda.
shir looga hadlay nadiifinta Minooyinka dhammaan dhulka Soomaaliya oo lagu qabtay Dalka Switzerland
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo fal-danbiyeed ku tilmaamay Imtixaanka la xaday
Madasha Xisbiyada oo sheegay Ciidamada Itoobiya oo xadgudub ka geysteen Gobolka Gedo
Dhageyso: Wasiirka Arimaha Gudaha Xuk. Fed. Soomaaliya oo Ka Hadlay Khilaafka u dhaxeeyo madaxda sare ee Galmudug
Dhageyso+Sawiro: Maxkamada sare oo ku raacday xukunkii dilka ahaa ee horay Maxkamada darajada 1-aad ugu xukuntay Ex-G/Sare C/naasir Xoosh Maxamed
Daawo: Ra’iisul wasaare Kheyre oo dardaaran ugu tagay Ciidamo howlgal u ambabaxaya